Giorgio Armani ၊ Emporio Armani နဲ့ Armani Exchange ဘာတွေကွာခြားသလဲ
13 Mar 2018 . 2:42 PM
Giorgio Armani ဆိုတာက မသိသူမရှိလောက်အောင် နာမည်ကြီးတဲ့ High-end Brand တစ်ခုဆိုတာတော့ အားလုံးသိကြပါတယ်။ ဖက်ရှင်ဂုရုကြီး Giorgio Armani က ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အမျိုးသား အမျိုးသမီးဝတ် Ready-to-wear အဝတ်အထည်တွေ၊ နာရီ၊ မျက်မှန်၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ လက်ကိုင်အိတ်၊ ခါးပတ်၊ ရေကူးဝတ်စုံ၊ အတွင်းခံစတဲ့ Accessories တွေ၊ ရတနာပစ္စည်း၊ ချောကလက်၊ ရေမွှေး၊ အလှကုန်ပစ္စည်း၊ Floral Service တွေအပြင် Furniture နဲ့ Hotel ပိုင်းကိုလည်းကိုလည်း ထိုးဖောက်လာပါတယ်။
Giorgio Armani ရဲ့အောက်မှာ Emporio Armani နဲ့ Armani Exchange ရှိပြီးနှစ်မျိုးလုံးက Giorgio Armani ကနေထုတ်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် Denim ဆက်စပ် Clothing တွေရောင်းတဲ့ Armani Jeans ၊ ကလေးအဝတ်အထည်တွေနဲ့ Accessories တွေရောင်းတဲ့ Armani Junior ၊ Made-to-Measure ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ Armani Collezioni ရှိပါသေးတယ်။
Ready-to-wear လိုင်းမှာပဲ Emporio Armani ၊ Armani Exchange ဆိုပြီးရှိလာချိန်မှာလူတော်တော်များများက ဒါတွေဟာ Armani ထုတ်ကုန်ရော တကယ်ဟုတ်ရဲ့လား၊ ပစ္စည်းအစစ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာမျိုးတွေ ထွေပြားတတ်ကြပါတယ်။ Emporio Armani ၊ Armani Exchange ဟာ Armani ရဲ့ထုတ်ကုန်စစ်စစ်တွေဖြစ်ပြီး Ready to Wear လိုင်းကိုဦးတည်ထားပေမယ့် သူတို့ရဲ့မတူညီတဲ့ခြားနားချက်တွေက ဒီလိုပါ။
Emporio Armani ဆိုတာက Giorgio Armani မှ မိတ်ဆက်တဲ့ Clothing Line တစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့် အသက် ၂၀ ကနေ ၃၀ အတွင်း အရွယ်ရောက်ပြီးလူငယ်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ မီလန်မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ Fashion Week မှာဆိုရင် Emporio Armani အောက်မှာ နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်တွေကိုအမြဲလို မိတ်ဆက်ပါတယ်။ Giorgio Armani Brand ထုတ်ကုန်တွေဟာ ဈေးနှုန်းပိုမြင့်မားပြီး Emporio Armani ကတော့ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပါတယ်။ အဝတ်အစားအပြင် နာရီ၊ ရေမွှေး၊ နေကာမျက်မှန်၊ ဖိနပ်စတဲ့ Emporio Armani ထုတ်ကုန်တွေကို အမေရိကားမှာရှိတဲ့ Emporio Armani စတိုးတွေမှာဝယ်ယူနိုင်ပြီး Armani ရဲ့ Official Online Store ကနေလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။
Armani Exchange – A|X
Giorgio Armani ရဲ့နောက်ထပ် Brand အခွဲတစ်ခုကတော့ Armani Exchange ပါ။ Armani Exchange ကို A|X လို့ညွှန်းဆိုပြီး ၁၉၉၁ ခုနစ်မှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ဆန်ကြော့မော့နေတဲ့ကောင်မလေးတွေ၊ Sexy ကျတဲ့ကောင်မလေးတွေနဲ့ခေတ်လူငယ်တွေအတွက်အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီ Brand ကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွေမှာ ရှိတဲ့ Fashion House တွေမှာ ဝယ်ယူနိုင်သလိုလက်ရှိမှာတော့ တခြားနိုင်ငံပေါင်း ၃၁ နိုင်ငံမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။
Armani Exchange အဝတ်အထည်တွေဟာ ပိုပြီးကာလာစုံသလို ခေတ်လည်းမီပါတယ်။ ပြီးတော့ Cotton များပါတယ်။ Giorgio Armani ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပေမယ့် ဈေးအရမ်းမများတဲ့ Range တစ်ခုဖြစ်ပြီး Armani Exchange Sports မှာတော့ နာရီတွေ၊ တီရှပ်နဲ့ Denims လိုမျိုးထသွားထလာအဝတ်အစားတွေ အများဆုံးရောင်းချပါသေးတယ်။
-Armani Exchange က Emporio Armani ထက်ပိုပြီး Trend ဖြစ်တယ်၊ Casual ဘက်ပိုသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေနဲ့ Street Fashion ကြိုက်သူတွေအတွက် ဦးတည်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
-Emporio Armani ကတော့ အသက် ၂၀ မှ ၃၀ အတွင်း အရွယ်ရောက်ပြီး လူငယ်တွေအတွက်ပိုမိုဦးတည်ပါတယ်။
-Emporio Armani က Armani Exchange ထက်ပိုပြီး ဈေးများပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ Giorgio Armani ၊ Emporio Armani နဲ့ Armani Exchange ကြားကွာခြားချက်လေးတွေပါ။ Emporio Armani နဲ့ Armani Exchange ထုတ်ကုန်တွေဟာ တင့်တယ်ခမ်းနားမှုနဲ့ခေတ်မီလှပမှုတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်တာမို့ Brand ကောင်းကောင်းကြိုက်တဲ့လူငယ်တွေ အတွက်တော့တကယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ချင်စရာ အိပ်မက်ပါပဲ။
Giorgio Armani ၊ Emporio Armani နဲ့ Armani Exchange ဘာတှကှောခွားသလဲ
Giorgio Armani ဆိုတာက မသိသူမရှိလောကျအောငျ နာမညျကွီးတဲ့ High-end Brand တဈခုဆိုတာတော့ အားလုံးသိကွပါတယျ။ ဖကျရှငျဂုရုကွီး Giorgio Armani က ရဲ့ ကိုယျပိုငျထုတျကုနျအမှတျတံဆိပျတဈခုဖွဈပွီး အမြိုးသား အမြိုးသမီးဝတျ Ready-to-wear အဝတျအထညျတှေ၊ နာရီ၊ မကျြမှနျ၊ ပိုကျဆံအိတျ၊ လကျကိုငျအိတျ၊ ခါးပတျ၊ ရကေူးဝတျစုံ၊ အတှငျးခံစတဲ့ Accessories တှေ၊ ရတနာပစ်စညျး၊ ခြောကလကျ၊ ရမှေေး၊ အလှကုနျပစ်စညျး၊ Floral Service တှအေပွငျ Furniture နဲ့ Hotel ပိုငျးကိုလညျးကိုလညျး ထိုးဖောကျလာပါတယျ။
Giorgio Armani ရဲ့အောကျမှာ Emporio Armani နဲ့ Armani Exchange ရှိပွီးနှဈမြိုးလုံးက Giorgio Armani ကနထေုတျလုပျတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါတှအေပွငျ Denim ဆကျစပျ Clothing တှရေောငျးတဲ့ Armani Jeans ၊ ကလေးအဝတျအထညျတှနေဲ့ Accessories တှရေောငျးတဲ့ Armani Junior ၊ Made-to-Measure ဆိုငျဖွဈတဲ့ Armani Collezioni ရှိပါသေးတယျ။
Ready-to-wear လိုငျးမှာပဲ Emporio Armani ၊ Armani Exchange ဆိုပွီးရှိလာခြိနျမှာလူတျောတျောမြားမြားက ဒါတှဟော Armani ထုတျကုနျရော တကယျဟုတျရဲ့လား၊ ပစ်စညျးအစဈရောဟုတျရဲ့လားဆိုတာမြိုးတှေ ထှပွေားတတျကွပါတယျ။ Emporio Armani ၊ Armani Exchange ဟာ Armani ရဲ့ထုတျကုနျစဈစဈတှဖွေဈပွီး Ready to Wear လိုငျးကိုဦးတညျထားပမေယျ့ သူတို့ရဲ့မတူညီတဲ့ခွားနားခကျြတှကေ ဒီလိုပါ။
Emporio Armani ဆိုတာက Giorgio Armani မှ မိတျဆကျတဲ့ Clothing Line တဈခုပါ။ အထူးသဖွငျ့ အသကျ ၂၀ ကနေ ၃၀ အတှငျး အရှယျရောကျပွီးလူငယျတှအေတှကျ ရညျရှယျထုတျလုပျပါတယျ။ မီလနျမှာနှဈစဉျကငျြးပတဲ့ Fashion Week မှာဆိုရငျ Emporio Armani အောကျမှာ နောကျဆုံးပျေါဖကျရှငျတှကေိုအမွဲလို မိတျဆကျပါတယျ။ Giorgio Armani Brand ထုတျကုနျတှဟော ဈေးနှုနျးပိုမွငျ့မားပွီး Emporio Armani ကတော့ ဈေးနှုနျးသငျ့တငျ့ပါတယျ။ အဝတျအစားအပွငျ နာရီ၊ ရမှေေး၊ နကောမကျြမှနျ၊ ဖိနပျစတဲ့ Emporio Armani ထုတျကုနျတှကေို အမရေိကားမှာရှိတဲ့ Emporio Armani စတိုးတှမှောဝယျယူနိုငျပွီး Armani ရဲ့ Official Online Store ကနလေညျး မှာယူနိုငျပါတယျ။
Giorgio Armani ရဲ့နောကျထပျ Brand အခှဲတဈခုကတော့ Armani Exchange ပါ။ Armani Exchange ကို A|X လို့ညှနျးဆိုပွီး ၁၉၉၁ ခုနဈမှာ စတငျမိတျဆကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ခတျေဆနျကွော့မော့နတေဲ့ကောငျမလေးတှေ၊ Sexy ကတြဲ့ကောငျမလေးတှနေဲ့ခတျေလူငယျတှအေတှကျအတှကျရညျရှယျပါတယျ။ ဒီ Brand ကို အမရေိကနျနိုငျငံတှမှော ရှိတဲ့ Fashion House တှမှော ဝယျယူနိုငျသလိုလကျရှိမှာတော့ တခွားနိုငျငံပေါငျး ၃၁ နိုငျငံမှာ ဝယျယူရရှိနိုငျပါပွီ။
Armani Exchange အဝတျအထညျတှဟော ပိုပွီးကာလာစုံသလို ခတျေလညျးမီပါတယျ။ ပွီးတော့ Cotton မြားပါတယျ။ Giorgio Armani ထုတျကုနျဖွဈပမေယျ့ ဈေးအရမျးမမြားတဲ့ Range တဈခုဖွဈပွီး Armani Exchange Sports မှာတော့ နာရီတှေ၊ တီရှပျနဲ့ Denims လိုမြိုးထသှားထလာအဝတျအစားတှေ အမြားဆုံးရောငျးခပြါသေးတယျ။
-Armani Exchange က Emporio Armani ထကျပိုပွီး Trend ဖွဈတယျ၊ Casual ဘကျပိုသှားပါတယျ။ ပွီးတော့ ဆယျကြျောသကျကလေးတှနေဲ့ Street Fashion ကွိုကျသူတှအေတှကျ ဦးတညျထုတျလုပျတာဖွဈပါတယျ။
-Emporio Armani ကတော့ အသကျ ၂၀ မှ ၃၀ အတှငျး အရှယျရောကျပွီး လူငယျတှအေတှကျပိုမိုဦးတညျပါတယျ။
-Emporio Armani က Armani Exchange ထကျပိုပွီး ဈေးမြားပါတယျ။
ဒါတှကေတော့ Giorgio Armani ၊ Emporio Armani နဲ့ Armani Exchange ကွားကှာခွားခကျြလေးတှပေါ။ Emporio Armani နဲ့ Armani Exchange ထုတျကုနျတှဟော တငျ့တယျခမျးနားမှုနဲ့ခတျေမီလှပမှုတှကေို ပေးစှမျးနိုငျတာမို့ Brand ကောငျးကောငျးကွိုကျတဲ့လူငယျတှေ အတှကျတော့တကယျကိုပိုငျဆိုငျခငျြစရာ အိပျမကျပါပဲ။
by Moethae Say .4hours ago
by Naw Hsel Hte .6hours ago
by yoelu .6hours ago
by Moethae Say . 8 hours ago
by Naw Hsel Hte . 10 hours ago